Kuzvidzora-Yega Spiral Mafriji Kununurwa mukati memakore eCOVID-19-NEWS-Square Technology Boka Co, Ltd.
Kuzvidzora-Yega Spiral Mahiza Anonunurwa pakati peMakore eCOVID-19
Pane 15th Chikumi 2020, nerori rekupedzisira remidziyo rakabva kudura rayo, Square Technology yakabudirira kuendesa maviri ekutanga eane mana-ekuzvitutisa mafiriji kuDachan Food (Taiwan). Iwo mafirita maviri ekuzvisarudzira-akarongedzwa akarongwa kuendeswa mumavhiki maviri anotevera. Iwo ekuzvitutira emhepo mafiriza anounzwa muhurongwa pasina kukanganiswa kweiyo COVID-4, nekuda kwevashandi ve Square Technology uye mainjiniya 'anoshanda nesimba.
Iyo Square Technology yekuzvimiririra-inokwenenzvera mafiriza emahara haigamuchire chete-zvakanaka nevatengi veChinese, asiwo inozivikanwa pakati pevatengi vekunze kwenyika. 2018-2019, akawanda-ekuzvichekerera emhepo mafiriji akaiswa uye achishanda zvizere muzvitatu zvakasiyana zvekugadzirisa zvirimwa zvePC Foods Group muThailand, inova hukuru hukuru processor muAsia. Zvikafu zveCP zvinogutsikana kwazvo nemhando yemidziyo inosanganisira hutsanana, kuvimbika, kugadzirisa zviri nyore, mushandisi unoshanda HMI kushanda uye nenguva rutsigiro rwehunyanzvi.
Kusvikira nhasi, Square Technology yakaendesa anopfuura makumi mana ekuzvitutira emhepo mafiriji, ayo anoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana siyana, kunyanya muhuku, nyama, chikafu chakagadzirira, nezvimwe.
Zvizhinji nezve Dachan Boka:
Apo Ho-jan Han akatanga Tai-Dong Mills, diki-diki processor yemafuta e soya nemakeke, muna 1957, akatanga chiratidzo chiratidzo chinoramba chichifambisa mutsivi waTai-Dong wemazuva ano - DaChan Great Wall Group.
Kweinopfuura hafu yezana ramakore, iyo DaChan Great Wall Group yakateedzera chiono chayo chekupayona nekutendeseka nekuzvininipisa. Iboka rinoshanda nenzira yakatwasuka yehuku ,rukoko,dzatsatsa,uye aquaculture iyo inodzora zvizere kubereka, kupararira, kugadzirwa kwekudya, kuuraya, uye kugadzirisa kwekupedzisira. Iri boka riri kuwedzerawo mafuta uye hupfu hwezvikamu zvebhizimusi uye richikura zvishoma nezvishoma muchikamu cheF & B uye mukutungamira kwechokwadi. Nhasi, iyo DaChan Great Wall Group inoshandisa mapoka matanhatu ebhizinesi, kusanganisira iyo Feed & Flour Bhizinesi Boka, Agri-Meat & Egg Bhizinesi Boka, Yakagadziriswa Chikafu Bhizinesi Boka, Chikafu Chebasa Bhizinesi, Southeast Asia Bhizinesi Boka, uye East Asia Bhizinesi Boka.
Zvichienderana nezvinangwa zvine hungwaru munzvimbo dzenharaunda, DaChan inoshanda pamusoro pedzimwe zana zana pamisika yayo mikuru muTaiwan, China, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Myanmar neCambodia.